Xildhibaano Ka Tirsan Xisbiga Jamhuuriga Oo Goaan Ka Soo Saaray Baadhitaankii Lagu Hayey Madaxweyne Donald Trump
(Hadhwanaagnews) Tuesday, March 13, 2018 12:11:45
Xubno sar sare oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo ku sugan Washington ayaa sheegay in ay waayeen wax caddeyn ah oo la xidhiidha wada shaqayn hoose oo dhexmartay kooxdii ololaha Trump iyo dawladda Ruushka.
Guddi hoosaadka Aqalka Congress-ka ee Sirdoonka oo ay majaraha u hayaan xildhibaanada Jamhuuriga ayaa baadhitaan ku hayay fadeexadii Ruushka ee faro galinta doorashadii dhacday 2016-kii.
Mike Conaway oo ah guddoomiyaha guddigan ayaa sheegay in ay hay'adaha sirdoonka ku raaceen warbixintoodii ahayd in Ruushka ay faro galiyeen ololaha doorashada.
Ninka ugu sareeya xisbiga Dimuqoraadiga ee guddigan ka tirsan Adam Schiff ayaa xisbiga Jamhuuriga ku eedeeyey in ay danaha dalka
ka horu marinayaan tan madaxweynaha.
Balse waxaa wali socda baadhitaanka Aqalka Sare iyo guddiga Robert Mueller ay ku hayaan isla arrintan.
Mr Mualler ayaa hormood ka ah baadhitaan dambi, halka baadhitaanka Aqalka Sare uu yahay oo kaliya in shacabka lagu wargaliyo wixii dhacay, kadibna ay sameeyaan soo jeedin qodobo laga badalo sharciyada dalkaas.
"Gunta arrinta waxa ay tahay in Ruushka ay faro galin ku sameeyeen doorashadii dhacday, mustaqbalkana ay samayn doonaan, balse ma jirto wax caddeyn ah oo aan helney oo ku saabsan in ay Trump isla ogaayeen hawsha" ayuu warbaahinta u sheegay Conaway oo muddo sanad ah ku hawlanaa baadhitaanka.
Xubnaha guddigan ku jira ee xisbiga Dimuqoraadiga ayaa lagu wadaa in ay iyaguna soo saaraan warbixintooda gaarka ah.
Guddiga baadhitaanka Congresska ayaa wareystay illaa 73 qof oo marqaati ah, waxayna daalacdeen illaa 300,000 kun bog oo xogo sirdoon ah.